/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/Oxandrolone (Anavar) အကုန်လုံးကိုမင်းသိဖို့လိုတယ်
အပေါ် Posted 10 / 26 / 2019 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
Oxandrolone ဆိုတာဘာလဲ (Anavar)?
Oxandrolone (53-39-4) သည် Anavar အမှုန့်ကို၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော androgen နှင့် anabolic steroid (AAS) မူးယစ်ဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏စွမ်းအားနှင့်စွမ်းအင်မြှင့်တင်မှုစွမ်းရည်များကြောင့်လူကြိုက်များသည်။ ၎င်းသည်လူသိအများဆုံးနှင့်အသုံးပြုသောခံတွင်း anabolic steroids များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Anabolic ဆိုသည်မှာ၎င်းသည်ဆဲလ်ပရိုတိန်းများကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်၊ ထို့ကြောင့်ကြွက်သားများလျင်မြန်စွာတိုးပွားလာပြီးအရိုးများကိုပိုမိုခိုင်မာစေသည်။
Testosterone analogue (၄ င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုသည် testosterone ဟော်မုန်းနှင့်ဆင်တူသည်) Anavar သည်နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ testosterone ဟော်မုန်းနည်းတူ၎င်းတို့နှင့်လည်းပေါင်းစပ်ထားသည်။ ယင်းကြောင့်၎င်းသည် testosterone ဟော်မုန်းအစားထိုးကုသမှုအတွက်အသုံးဝင်သည်။
Oxandrolone (Anavar) မှန်ကန်သောသောက်သုံးသောပမာဏကိုလိုက်နာသည့်အခါအမှုန့် (၅၃-၃၉-၄) ကိုအမျိုးသားများရော၊ အမျိုးသမီးများပါလုံခြုံစေရန်အသုံးပြုသည်။ ပိုကောင်းသေးသည်၎င်း၏ဖြစ်နိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများများသောအားဖြင့်ပျော့ဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီကိုဖြုန်းတီးသောရောဂါလက္ခဏာများသို့မဟုတ်အထီး hypogonadism ရောဂါခံစားနေရသူများအတွက်နိုက်ထရိုဂျင်နှင့်အဆီမပါသောကြွက်သားထုထည်ကိုထိန်းသိမ်းရန်တိုးတက်စေသောအဖြေများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အမျိုးသားတစ် ဦး သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အတွက်အနူးညံ့သော်လည်းအစာရှောင်နေသော anabolic steroid ကိုရှာဖွေနေလျှင်၊ သင်သည် Oxandrolone အမှုန့်နှင့်မမှားပါ။53-39-4) ။ Anavar reddit ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများတွင်အချို့သောသူများက၎င်းသည်မိန်းကလေးအများစုနှင့်အဆင်ပြေသောစတီးရွိုက်အနည်းစုထဲမှတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် The Girl Steroid ဟုခေါ်သည်။
AASraw သည် anavar အမှုန့် (oxandrolone) ၏ကျွမ်းကျင်သောထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
Oxandrolone (Anavar) ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် Searle Laboratories (Pfizer ၏လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီ) ၌ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် Celebrex, NutraSweet နှင့် Ambien ကဲ့သို့သောအခြားထင်ရှားသောဆေးဝါးထုတ်လုပ်သူလည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Raphael Pappo နှင့် Christopher J. Jung တို့၏ပူးပေါင်းအားထုတ်မှုကိုတီထွင်ခြင်းဖြစ်သည်။
သုတေသနကျွမ်းကျင်သူများသည် Oxandrolone ၏အလွန်အားနည်းသော androgenic သက်ရောက်မှုများကြောင့်ဆေး၏ anabolic သက်ရောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည်။ သူတို့ကနောက်ပိုင်းမှာ 1964 ခုနှစ်, တစ် ဦး အဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးမိတ်ဆက်ပေးသည် အတင်းအဓမ္မကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းနှင့်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီ / အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါကုသမှုခံယူသူများ၏ကြွက်သားများတိုးပွားလာမှုကိုမြှင့်တင်ရန်ဆေးဝါးဆေး။
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ဒီခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူများကမူးယစ်ဆေးဝါးကိုအများအားဖြင့်အလွဲသုံးစားပြုခဲ့ကြပြီး၊ ရလဒ်အနေဖြင့် Searle Laboratories သည် 1989 တွင်၎င်းကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။
နှစ်အတန်ကြာပြီးနောက် Bio-Technology General Corporation (Bio-Technology General Corporation) သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလွှဲပြောင်းယူခဲ့သည်။ 1995 ဆေးကိုကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများအရ ၄ င်း၏ဒုတိယမြောက်ထုတ်လွှတ်မှုဖြစ်သော်လည်း Oxandrin (အမှတ်တံဆိပ်) အောက်တွင်ရှိသည်။
ထိုအချိန်အတောအတွင်းတွင် anabolic steroid ဆေးကို Genesis အပါအ ၀ င်နာမည်အမျိုးမျိုးဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည် Oxandrolone နှင့် Oxandrin, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်။ သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင်၎င်း၏လက်ရှိအမေရိကန်အမှတ်တံဆိပ် Anavar နှင့်ပေါင်းခဲ့သည်။
အချိန်နှင့်အမျှစားနပ်ရိက္ခာနှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး (FDA) က Turner Syndrome၊ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းနှင့်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းတို့အတွက်မိဘမဲ့ဆေးဝါးအဆင့်အတန်းအတွက် Oxandrolone ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။
Oxandrolone သည်ထုတ်လုပ်ရန်အလွန်စျေးကြီးပြီး၎င်း၏ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းနှင့်သုံးစွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများရှိသည်။ ဤအခက်အခဲများကိုကျော်လွှားရန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန်မူးယစ်ဆေးဝါးမြေအောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နေသောရောင်းချသူအမြောက်အများရှိသည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ အနက်ရောင်စျေးကွက် 'Oxandrolone' ကိုလိုအပ်သောစံနှုန်းများကိုလိုက်နာရန်ခဲယဉ်းသောမရှိသောမြေအောက်ခန်းဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်ထုတ်လုပ်သည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်အနက်ရောင်စျေးကွက်သို့မဟုတ်မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းမှတရားဝင် Anavar ကိုရှာရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ လိုချင်သောရလဒ်များကိုမကမ်းလှမ်းသည့်အပြင်ဤဆေးသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။
မြေအောက်စျေးကွက်တွင်ရောင်းရန် Anavar နှင့်ပြproblemနာနောက်တစ်ခုမှာ၎င်းတို့ဝယ်ယူမှုနှင့်အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်သောစည်းမျဉ်းများမရှိသောကြောင့်အရွယ်မရောက်သေးသူများပင်ယင်းကိုအလွဲသုံးစားပြုနိုင်သည်။
သငျသညျစစ်မှန်ခြင်းနှင့်လုံခြုံ Anavar ရလိုလျှင်, သင်သည်သင်၏လုပ်သေချာပါစေ Oxandrolone အမှုန့်ဝယ် တစ် ဦး လိုင်စင်ရနှင့်တရားဝင်စည်းမျဉ်းရောင်းချသူထံမှ။ ထိုကဲ့သို့သောရောင်းသူများထံမှ Oxandrolone ကို ၀ ယ်ခြင်းကမှောင်ခိုဈေးကွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပို၍ စျေးကြီးပါသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ကျိုးနပ်ပါသည်။
သင်အမှန်တကယ်ကုန်ကြမ်းအမှုန့်သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ကိုရပြီဆိုတာသေချာပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီရောင်းချသူအများစုဟာမမှန်မကန်ထုတ်ကုန်များရောင်းချခြင်းကြောင့်သူတို့ရဲ့လိုင်စင်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ AASraw စစ်မှန်သော Oxandrolone အရောင်းရဆုံးဖြစ်သည်။
Oxandrolone စျေးနှုန်း ပုံမှန်အားဖြင့်မြင့်မားသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုအလွန်နက်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချသောရောင်းချသူကိုတွေ့လျှင်ရောင်းသူသည်လိုင်စင်ရရှိထားပြီးတရားမ ၀ င်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်မကုန်ဆုံးစေရန်တရား ၀ င်လည်ပတ်မှုရှိမရှိရှာဖွေရန်။
Anavar / Oxandrolone သည်ထုတ်လုပ်ရန်စျေးကြီးသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကို“ အထူးလျှော့စျေး” စျေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချနေသည့်မည်သည့်ကုန်သည်ထံမှမဆို ၀ ယ်ရန်ယေဘုယျအားဖြင့်အကြံဥာဏ်မကောင်းပေ။ သင်ထွက်စစ်ဆေးနိုင်သည် Anavar ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ရောင်းသူသည်တရားဝင်မူဘောင်အတွင်းတွင်အလုပ်လုပ်သည်၊ သူတို့၏ထုတ်ကုန်များသည်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းဟုတ်မဟုတ်သိရန်။ Anavar ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်သင့်အားဆေးဝယ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာများနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်များပေးနိုင်ပါသည်။
US နှင့်အခြားနိုင်ငံများရှိ Oxandrolone ဥပဒေအခြေအနေ
ယူအက်စ်တွင်ထိန်းချုပ်ထားသည့်ပစ္စည်းအက်ဥပဒေသည်ဇန်န ၀ ါရီ ၃ တွင်ထိန်းချုပ်ထားသည့်ပစ္စည်းအဖြစ်အန်ဒရိုဂျင်နှင့်ခန္ဓာဗေဒစတီးရွိုက်များအနက်အောက်စန်ဒရိုလွန်း / အေဗားဗာများကိုခွဲခြားထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာလူတစ် ဦး သည်၎င်းကိုလိုင်စင်ရဆရာ ၀ န်နှင့်ဆေးဆိုင်မှတစ်ဆင့်ရရှိရမည်ဖြစ်သည်။
ဇယား -၃ တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုတရားမဝင်လက် ၀ ယ်ထားသူအားတရားစွဲဆိုခြင်းအပါအ ၀ င်၊ ဟိုစတီရွိုက်အမှုန့် of Oxandrolone ၏နောက်ဆုံး Anavar သည်ပြည်နယ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုသက်ဆိုင်သောသက်ဆိုင်ရာဥပဒေများပေါ်တွင်မူတည်သည်။
များသောအားဖြင့်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကိုထောင်ဒဏ်နှင့်ဒဏ်ရိုက်ခြင်းခံရသည်။ Controlled Substance Act အရ Oxandrolone နှင့်ပတ်သက်သောရာဇ ၀ တ်မှုများတွင်ဆေးညွှန်းမရသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများဝယ်ယူခြင်းနှင့်ခိုင်လုံသောဆေးညွှန်းမပါဘဲပိုင်ဆိုင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
ယူကေတွင် Oxandrolone သည်ဇယား ၄ တွင်အမျိုးအစားခွဲခြားထားသောထိန်းချုပ်သောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အားလုံး anabolic steroids ဤအမျိုးအစားပိုင်။
ကနေဒါတွင် Oxandrolone နှင့်ပတ်သက်သောနိုင်ငံ၏ဥပဒေများသည်ဇယား ၄ မှလွဲ၍ ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်အချိန် 1996 အထိ UK ရှိဥပဒေများနှင့်ဆင်တူသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးပိုင်ဆိုင်ထားသူများ၊ ၎င်းကိုလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားသူများနှင့်၎င်းကိုပိုင်ဆိုင်ရန်စိတ်ဝင်စားသူများအတွက်တရားဝင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းသောလမ်းညွှန်ချက်မရှိပါ။
သို့သော်ကနေဒါစတီရွိုက်ဥပဒေတွင်နိုင်ငံအတွင်းရှိလူတစ် ဦး သည် ၀ ယ်လိုသည့်အကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြခြင်းမရှိပါကမူးယစ်ဆေး ၀ ယ်နိုင်သည်မဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ ပေးထားသောအကြောင်းပြချက်ပေါ် မူတည်၍ ရောင်းသူသည်ဝယ်ယူမှုတောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံနိုင်သည်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်နိုင်သည်။ စတီးရွိုက်ကို ၀ ယ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုကိုနောက်တစ်ခုမပြုလုပ်မီအနည်းဆုံးရက် ၃၀ အပြီးလုပ်ဆောင်သင့်သည်။
အဆိုပါအတွက်မရေ ကနေဒါနိုင်ငံ၏မူးယစ်ဆေးဝါးဥပဒေများ၊ အထူးသဖြင့် Oxandrolone အထိသိသိသာသာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပုံရသည်၊ ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူများအနေဖြင့် steroid ကိုအပန်းဖြေရန်အတွက်အသုံးပြုသည့်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူများအားတွေ့ရှိပါကတရား ၀ င်အရာရှိများကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည်။ သို့သော်များသောအားဖြင့် Anavar နှင့်သက်ဆိုင်သောပထမပြစ်မှုသည် $ 2000 ထက်မပိုသောငွေဒဏ်နှင့် 18 လအထိထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရနိုင်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ Oxandrolone ကုန်ကြမ်းအခြေအနေ
Oxandrolone ကဲ့သို့သော steroids ထုတ်လုပ်မှုကိုနိုင်ငံများစွာ၌အလွန်အမင်းထိန်းချုပ်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ထုတ်လုပ်သူအရေအတွက်ကိုကန့်သတ်ထားသည်။
သို့သော်အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံအသီးသီးမှမှောင်ခိုဈေးကွက်မှအော်ပရေတာများမှ Oxandrolone ကုန်ကြမ်းများကိုတင်သွင်းရန်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ရောင်းချရန်အတွက်ဥပဒေအရအားနည်းချက်များရှိနေသည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် Oxandrolone အမှုန့်ကုန်ကြမ်းအရောင်းအဝယ်လုပ်သူဒါဇင်နှင့်ချီ။ ရှိသည်။ ဤသည်ကထုတ်ကုန်ကိုထပ်မံထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ၀ ယ်ချင်သော ၀ ယ်သူများထက်ကုန်ပစ္စည်းကိုနိုင်ငံတွင်ပိုမိုရရှိနိုင်စေသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံမှ Oxandrolone အမှုန့်များတင်သွင်းမှုအချို့သည်သောင်းကျန်းနေသဖြင့်ကမ္ဘာအနှံ့မှောင်ခိုရောင်းဝယ်သော Oxandrolone ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှုသို့ ဦး တည်သွားသည်။
ကြွက်သားကြီးထွားမှုကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးရန် Oxandrolone အသုံးပြုသူအများစုသည် Steroid တစ်မျိုးကိုသောက်သုံးသည်။ ဤသည်သည်အဓိကအားဖြင့်ရောဂါကူးစက်မှုသို့မဟုတ်ခွဲစိတ်မှုကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းသူများ၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေရန်ဖြစ်သည်။
အံ့သြစရာမှာ Anavar ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းသည်ကြွက်သားညံ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကြောင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်စတီရွိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ရေအလွန်အကျွံမထိန်းသိမ်းနိုင်ပါ။ ဤမူးယစ်ဆေးဝါး၏ရလဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်အံ့သြစရာတစ်ခုမှာအသုံးပြုသူသည်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာခြင်းကိုကိုင်တွယ်ရန်လွယ်ကူခြင်းဖြစ်သည်။
Testosterone နှင့် Anadrol ကဲ့သို့သောလူကြိုက်များသောအစုလိုက်အပြုံလိုက်အေးဂျင့်များအသုံးပြုခြင်းမှရရှိသောအကျိုးအမြတ်ကိုရရှိနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးသည်သာမန်အကျိုးအမြတ်ကိုသာရှာဖွေနေသူများအတွက်သင့်လျော်သည်။ ထို့ကြောင့်အများစုသည်ကြွက်သားများအနည်းငယ်တိုးခြင်းကိုသာစိတ်ဝင်စားကြသောကြောင့်အမျိုးသမီးများကအများအားဖြင့်ပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။
သငျသညျလူတို့အဘို့ Anavar ချင်တယ်လားသို့မဟုတ် အမျိုးသမီးများအတွက် Anavar ရာသီဥတုမကောင်းချိန်တွင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မြင့်တက်လာခြင်းအတွက်သင် Oxandrolone ၏ဇီဝဖြစ်စဉ်တိုးမြှင့်စရိုက်များကိုအမှန်ပင်နှစ်သက်လိမ့်မည်။ သင်ပိုမိုအားကောင်းသည့်အခြား steroids ကိုအသုံးပြုသည့်အခါနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်ရာသီဥတုမဟုတ်သည့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီပမာဏနည်းစေကြောင်းသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။
ယောက်ျားများအတွက် Anavar သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးများအတွက် Anavar သည်ဖြတ်တောက်ခြင်းအဆင့်တွင်သင့်အတွက်အလွန်အထောက်အကူပြုသည့်ဖြည့်စွက်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးသဘာဝကျကျအလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန် anabolic ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, တ ဦး တည်း dieting အခါပိန်တစ်ရှူးထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အလွန်ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
သင်သည်ခန္ဓာကိုယ်အဆီကိုသွန်းလောင်းလိုပါကသင်၏အများဆုံးတစ်သျှူးထိန်းသိမ်းမှုအတွက်သင်၏ကယ်လိုရီစားသုံးမှုသည်သင်လောင်ကျွမ်းသောကယ်လိုရီပမာဏထက်နည်းသင့်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သင်၏အစားအစာအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ, သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာအစွမ်းထက်အားကောင်းတဲ့ anabolic အေးဂျင့်မပါလျှင်, သင်ကြွက်သားအချို့ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ ၎င်း၏ခိုင်ခံ့သော anabolic ဂုဏ်သတ္တိများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင်, Anavar နေရာလေးကိုလာနေရာဖြစ်သည်။
Anavar ကိုဖြတ်တောက်သောအဆင့်တွင်သင်သုံးသောအခါသင့်ခန်ဓာသည်အဆီကိုပိုမိုထိရောက်စွာမီးရှို့နိုင်လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံး၌သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများကိုသင်ပိုမိုတွေ့ကြုံခံစားရပြီးပိုမိုတင်းကျပ်သော၊ ထို့ကြောင့်လူအများစုကရွေးချယ်ကြသည် ကိုယ်အလေးချိန်များအတွက် Anavar.
Anavar သည်အားကစားအတွက်အားကစားအတွက်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤသည်၌၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုထိုကဲ့သို့သော Halotestin သို့မဟုတ် Dianabol ကဲ့သို့သောအခြား steroids ကဲ့သို့သိသာမဟုတ်ပါဘူး။
အားကစားသမားတစ် ဦး ၏ခွန်အားသည်သူ / သူမ၏အမြန်နှုန်းနှင့်စွမ်းအားကိုလွှမ်းမိုးသည်။ နှစ်ခုလုံးသည်သူ / သူမ၏အလုံးစုံအားကစားစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်တိုက်ရိုက်သြဇာသက်ရောက်သည်။ အားကစားသမားအားကောင်းလေလေစွမ်းဆောင်ရည်ကပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။
အားကစားအပြင်အားကစားသမားများသည်အတော်အတန်ပေါ့ပါးသောကြောင့်ကြွက်သားများကြီးထွားမှုကိုအားမပေးလိုပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကလူတစ်ယောက်ကိုကြွက်သားတွေတိုးပွားအောင်မလုပ်ဘဲခွန်အားပေးတာကြောင့် Anavar ဟာသင့်တော်တဲ့အားကစားစွမ်းရည်မြှင့်သူဖြစ်လာတယ်။ ပို၍ ကောင်းသည်မှာရေအားထိန်းထားနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်အားကစားသမားတစ် ဦး အနေနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်သည်။
သင် Anavar ကို သုံး၍ အဆီအချို့ကိုဖယ်ထုတ်ရန်သို့မဟုတ်သင်၏အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်ဖြစ်စေသင်ဆေးညွှန်းကိုသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းဆေးပြန်သောက်လျှင်၊ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင်၏ကြွက်သားခံနိုင်ရည်ကိုတိုးစေသည်။
ဤတွင်လူကြိုက်များသော steroids အများစု၏ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုဒီမှာ။ oxandrolone ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်သူတို့နှင့်သက်ဆိုင်မှုရှိမရှိကြည့်ရအောင်။
တူသောအချို့ steroids မတူဘဲ Trenbolone Oxomatolone မှထုတ်လုပ်သောဟော်မုန်းသည် grogenecomastia ဖြစ်ပေါ်စေပြီး estrogenic ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကရေကိုထိန်းထားနိုင်ခြင်းမရှိရင်အီစထရိုဂျင်အဆင့်ကိုမြင့်တက်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ရေထိန်းထားခြင်းမရှိသောပစ္စည်းသည်အသုံးပြုသူအားသွေးပေါင်ချိန်မြင့်မားမှုကိုအားနည်းစေသည်။
Oxandrolone သည် estrogenic ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းသည်၎င်းသည် progestin နှင့်သက်ဆိုင်သည့်မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုမှမပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
Oxandrolone သည်အလွန် androgenic မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်အနည်းငယ် androgenic လုပ်ဆောင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ယင်းကြောင့်၎င်းကိုအသုံးပြုသောသူများသည်ဝက်ခြံထွက်လာနိုင်ပြီးအထီးပုံစံပြောင်လွန်းခြင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသူများသည် Steroid တစ်မျိုးအသုံးပြုပြီးနောက်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုပိုမိုတွေ့ကြုံနိုင်သည်။
အမျိုးသမီးများအတွက် Anavar သည်ခန္ဓာကိုယ်မှဆံပင်များကြီးထွားခြင်း၊ အသံတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်တိုးပွားမှုစသောရောဂါလက္ခဏာများကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်သည့် androgenic အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်ညာဘက်ကိုယူခြင်းအားဖြင့်ရောဂါလက္ခဏာများကိုကာကွယ်နိုင်သည် Anavar သောက်သုံးသော.
အကယ်၍ သင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးလက္ခဏာများကိုသင်တွေ့ကြုံခံစားရပါကဆေးကိုချက်ချင်းမသုံးစွဲရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည်။ အဲဒီလိုလုပ်ပြီးနောက်ရောဂါလက္ခဏာတွေပျောက်ကွယ်သွားသင့်တယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်သူတို့ကိုလျစ်လျူရှုပြီးစတီရွိုက်ကိုဆက်လုပ်နေလျှင်ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာသင့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, steroid ရဲ့အသုံးပြုသူအများစုယေဘုယျ androgenic သဘောသဘာဝအတော်လေးနိမ့်သောကြောင့်, androgenic ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမခံစားရဘူး။
ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် androgenic ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုကာကွယ်ရန် 5-alpha reductase inhibitors နှင့်အတူအသုံးပြုရန်လိုအပ်သောအခြား anabolic steroids များနှင့်မတူဘဲ Anavar သည် inhibitors မပါဘဲပင်လုံခြုံ။ ပျော့ပျောင်းသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် 5-alpha reductase အင်ဇိုင်းသည် testosterone ဟော်မုန်းကို dihydrotestosterone သို့လျှော့ချရန်ရည်ရွယ်သောကြောင့်ဖြစ်သော်လည်း Oxandrolone သည် dihydrotestosterone ဖြစ်သောကြောင့်အင်ဇိုင်းမလိုအပ်ပါ။
အဆိုးရွားဆုံး oxandrolone ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုမှာကိုလက်စထရောနှင့်ဆက်စပ်မှုဖြစ်သည်။ Oxandrolone ဟော်မုန်းသည် HDL ကိုလက်စထရောကို 50% အထိတိုးမြှင့်ပေးပြီး LDL ကိုလက်စထရောအဆင့်ကို 30% အထိမြှင့်တင်ပေးသည်။
ဤအလက်စထရောပြောင်းလဲမှုကြောင့်လက်စထရောပြissuesနာများရှိသူများကို oxandrolone အသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အကြံပေးသည်။ သို့မဟုတ်ပါက၎င်းကိုအသုံးပြုရန်လုံလောက်သောကျန်းမာသူများသည်ကိုလက်စထရောနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသောအစားအစာများကိုစားသုံးခြင်းနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများစွာပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ကျန်းမာသောဘဝပုံစံကိုထိန်းသိမ်းရန်တိုက်တွန်းပါသည်။
သင်အပါအ ၀ င်မည်သည့် Steroid မဆို Anavarသင့်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း၌ testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကိုတားဆီးပေးသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ဖိနှိပ်မှုနှုန်းကို Steroid တစ်မျိုးနဲ့ကွဲပြားခြားနားသည်။ လက်ရှိရောင်းချနေသောအခြား steroids များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Anavar သည်အပြင်းထန်ဆုံးဖိနှိပ်သည့်သက်ရောက်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၄ င်းသည်ခြုံငုံသွေးရည်ကြည်အဆင့်ကိုတစ် ၀ က်နီးပါးဖိနှိပ်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ Anvar ၏သဘာဝ testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှု၏ဖိနှိပ်မှုသည်အနည်းငယ်သာဖြစ်သော်လည်းအမျိုးသားများသည် exosterous testosterone ဟော်မုန်းကိုသူတို့၏ဖြည့်စွက်မှုအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်ပြုလုပ်ရန်အကြံပေးသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် oxandrolone ဟော်မုန်းသည်အခြားစိတ်ဆင်းရဲစရာရောဂါလက္ခဏာများတွင် testosterone ဟော်မုန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြေအနေမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
သို့သော်အချို့ယောက်ျားများသည် testosterone ဟော်မုန်းနှင့်ပတ်သက်သောပြissueနာကို Anavar အသုံးပြုခြင်းကြောင့် testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ကိုစတီရွိုက်က 50% လျှော့ချသည့်တိုင်အောင်အသုံးပြုသည်။ ဒါကအမျိုးသားရဲ့သဘာဝ testosterone ဟော်မုန်းပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူအမျိုးသားအများစုသည် steroid ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သောရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာစေရန် exogenous testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုလိုအပ်သည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာပင်အခြား anabolic steroid ကဲ့သို့ပင် Anavar ၏ testosterone ဟော်မုန်းဆိုးကျိုးများသည်လူတစ် ဦး မှမသောက်တော့သည့်အခါပျောက်သွားလိမ့်မည်။ သို့သော်အပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူရန်အချိန်ယူရမည်၊ ၎င်းသည်စတီရွိုက်ကုသမှုပြီးဆုံးချိန်တွင်သံသရာလွန်ကုထုံး (PCT) အစီအစဉ်ကိုအကြံပြုသည်။ PCT သည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမြန်စေသည်။
Anavar သည် C17-aa ဖြစ်သည် ဟို steroid တစ်မျိုး ဒါကြောင့်တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော်လည်းအသည်းပျက်စီးစေနိုင်သည်။ steroid ကိုဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းသည်အသည်းအင်ဇိုင်းတန်ဖိုးများသိသိသာသာတိုးပွားစေသည်။ အသည်းအင်ဇိုင်းတိုးများလာခြင်းကအသည်းကိုပိုမိုဖိစီးစေပြီးပျက်စီးမှုအန္တရာယ်ကိုတိုးစေသည်။
ထို့ကြောင့်သင်၏အသည်းကျန်းမာရေးအတွက်သင့်အသည်းပြproblemနာရှိပါက Anavar အပါအဝင် C17-aa anabolic steroid ကိုအသုံးမပြုရန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏အသည်းအလွန်အကျွံမနေစေရန် Anavar ကဲ့သို့သော C17-aa anabolic steroid ကဲ့သို့သောအရက်အလွန်အကျွံမသောက်ပါနှင့်။
Oxandrolone ကိုသုံးနေစဉ်သင်၏ဖြည့်စွက်အစီအစဉ်တွင်အသည်းကအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေမှုသည်သင်၏အသည်းကျန်းမာရေးကိုများစွာအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ Steroid ကိုတိုးချဲ့အသုံးပြုခြင်းကအသည်းကိုပျက်စီးစေနိုင်သဖြင့် Anavar ဖြည့်စွက်အချိန်ကာလကိုအများဆုံး 8 အထိသာကန့်သတ်ရန်အရေးကြီးသည်။
Oxandrolone သည်အမျိုးသားများအတွက်သင့်လျော်သော်လည်း Anavar သံသရာသည်အမျိုးသားများအတွက်အလွန်နူးညံ့ပြီးအမျိုးသားအသုံးပြုသူအများစုသည် ၄ ​​င်းတို့၏ကြီးထွားလာသောလိုအပ်ချက်များအတွက်အထူးသဖြင့်ရာသီအလိုက်ရာသီဥတုသို့မဟုတ်ကြီးထွားမှုကာလများတွင်အနည်းငယ်ထိရောက်မှုရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကြွက်သားကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်စွဲမြဲနေဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူအများစုအတွက်အဓိကရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပို၍ ကောင်းသည်မှာမူးယစ်ဆေးသည်လူတစ် ဦး ၏ဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုကိုတိုးတက်စေသည်။
အမျိုးသမီးများအတွက် Anavar သံသရာ
Oxandrolone ဟော်မုန်းသည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တိုးမြှင့်မှုအတွက်မဟုတ်ပါကအသုံးပြုသူအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည် 100% ပိန်သောတစ်ရှူးအမြတ်ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်၎င်းသည်တွေ့ရခဲသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာသည်းခံနိုင်သော Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောလှုပ်ရှားမှုရှိသည့်အားကစားအမျိုးသမီးများအတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Oxandrolone အမျိုးသမီးများသည်အစားအသောက်၌ပါ ၀ င်သူများနှင့်ကြီးထွားမှုအဆင့်များသည်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပုံနှင့်ပိန်ကြုံသော bikini ကိုယ်ထည်အပါအ ၀ င်ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများစွာကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်ဆေးဝါးမှကြီးထွားစေသည်။
အမျိုးသမီးများအတွက်ပုံမှန် Anavar သံသရာသည်တစ်နေ့လျှင်မူးယစ်ဆေး၏ 10mg မှ 20mg ဖြစ်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့် ၆ ပတ်ကြာမြင့်သည်။ အချို့သောသံသရာများသည် 20mg ထက်ကျော်လွန်သော်လည်းပိုလျှံမှုသည်မလိုအပ်ပါ။ oxandrolone ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးစတီးရွိုက်ဆေးကိုခြောက်ပတ်ကျော်အသုံးပြုလိုပါက3- သီတင်းပတ်သင်တန်းကိုမစတင်မီ4မှ6ရက်သတ္တပတ်ကာလကိုစတင်ရန်နှင့်အကြံပြုလိုသည်။
အမျိုးသားများအတွက် Anavar သံသရာ
အထီးအသုံးပြုသူအများစုအသုံးပြုသည် အထူးသဖြင့်သူတို့ဖြတ်တောက်ခြင်းဖြစ်စဉ် / အစားအစာအဆင့်ရောက်နေသည့်အခါကိုယ်အလေးချိန်များအတွက် Anavar ။ သူတို့ကတစ်နေ့လျှင် 50mg ဆေးကိုသင့်လျော်သော Anavar သောက်သုံးသောဆေးဖြစ်သည်။ သို့သော်ယောက်ျားတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်သည်တစ်နေ့လျှင် 80mg အထိသောက်နိုင်သည်၊ ထိုကန့်သတ်ချက်အတွင်း၌သင့်ဆေးသည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အန္တရာယ်ကင်းသည်။
စဉ်းစား Oxandrolone စျေးနှုန်း အနည်းဆုံး $2သည် 10mg tab အတွက်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများအတွက် Anavar သံသရာသည်အလွန်စျေးကြီးနိုင်သည်။
မှန်ကန်သော Anavar သောက်သုံးသောသည်လူတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားသည်။ တ ဦး တည်းရဲ့လိင်၊ သူ / သူမလွတ်လပ်တဲ့ပန်းတိုင်တွေပေါ်မူတည်ပြီး။
ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသမီးများသည်တူညီသောရလဒ်များ / အကျိုးကျေးဇူးများရရှိရန်အတွက်အမျိုးသားတစ် ဦး ထက် Oxandrolone ပမာဏနိမ့်ကျသင့်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အတွက် Anavar ဖြတ်တောက်ခြင်းသည်နေ့စဉ် 10mg အရေအတွက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်နေ့စဉ်ဆေးသည် 20mg ထက်မြင့်တက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်လိုချင်သောရလဒ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော်လည်းစတီရိုဒီဒီပမာဏမြင့်မားစွာဖြင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
တစ်နေ့လျှင် 80mg စတင်သော Anavar သောက်သုံးသောဆေးကိုအားကိုးလိုသောအမျိုးသားအားကစားသမားသည်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, သေးငယ်တဲ့ဆေးထိုးနိုင်ပေမယ့်သူက 30mg ထက်မနည်းဖြစ်သင့်သည်မဟုတ်ရင်သူကကျေနပ်ဖွယ်ထိရောက်သောလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သုတေသနနှင့်အမျိုးမျိုးသောအရသိရသည် Anavar Reddit ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, ၏စံသောက်သုံးသော အမျိုးသားများအတွက် Anavar တစ်နေ့လျှင် 50mg ဖြစ်ပါတယ်။
အမှုန့်: Oxandrolone ၏ 1 ဂရမ်နှုန်း
ထုတ်လုပ်မှုအမြင့်ဆုံး: 20 mg / ml
Oxandrolone အမှုန့်များ၏ 1 ဂရမ်
အရည်ပမာဏကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်သင့်လျော်သော 1 beaker
တံစို့ 8 ၏ 300 ml
2 Proof အစေ့အရက်၏ 190 ml
သင်တရားဝင်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်သော Anavar ကို ၀ ယ်ယူနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောနေရာသည်လိုင်စင်ရပြီးတရားဝင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောရောင်းချသူမှဖြစ်သည်။ ထိုမှတ်စုတွင် AASraw သည်ထုတ်ကုန်ကိုရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။
AASraw သည်အကြီးစားပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် Oxandrolone ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ကြောင့်မည်သည့်ပမာဏနှင့်မဆိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည် ရောင်းရန် Anavar နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းအဖြစ်သို့မဟုတ်အဆုံးသတ်စားသုံးမှု။ ကျွန်ုပ်တို့သည် CGMP အောက်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးပြည့်မီသောထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထိပ်တန်းအဆင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုသေချာစေရန်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွင်းတွင်အလုပ်လုပ်ရန်ကူညီသည်။
Meta ဖော်ပြချက် - Oxandrolone (Anavar) သည်အင်ဒရိုဂျင်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏အင်အားနှင့်စွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သောအင်ဂျင်နီယာနှင့်ခန္ဓာဗေဒ steroid (AAS) ဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူသိအများဆုံးနှင့်အသုံးပြုသောခံတွင်း anabolic steroids များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Oxandrolone သည်မှန်ကန်သောသောက်သုံးသောပမာဏကိုလိုက်နာသောအခါအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရပါသည်။
R De Demling, DeSanti L: ပြင်းပြင်းထန်ထန်လောင်ကျွမ်းမှုမှပြန်လည်နာလန်ထူလာသောအခါ Oxandrolone ပိန်သောအစုလိုက်အပြုံလိုက်တိုးပွားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မီးလောင် 2003 ဒီဇင်ဘာ; 29 (8): 793-7 [PMID: 14636753]
John Cabaj“ Oxandrolone ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်စဉ်။ ” ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၀၃ ကိုထုတ်ဝေသောမူပိုင်ခွင့် US20030032817
Karim, အေ, Ranney, RE, Zagarella, ဂျေ, & Maibach, HI (1973) ။ Oxandrolone သဘောထားနှင့်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှု။ လက်တွေ့ဆေးဝါးဗေဒ & ကုထုံး, 14 (5), 862-869 ။
Raiti, အက်စ်, Trias, အီး, Levitsky, L. , & Grossman, က MS (1973) ။ Oxandrolone နှင့်လူ့ကြီးထွားမှုဟော်မုန်း - ကလေးတိုများ၌ကြီးထွားမှုကိုလှုံ့ဆော်သောသက်ရောက်မှုများနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ ကလေးများ၏ရောဂါအမေရိကန်ဂျာနယ်, 126 (5), 597-600 ။
Rosenbloom, AL, & Frias, JL (1973) ။ Turner syndrome ရောဂါတိုးတက်မှုအတွက် Oxandrolone ။ ကလေးများရောဂါ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 125 (3), 385-387 ။
Strauss, RH, Liggett, MT, & Lanese, RR (1985) ။ ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ထားသောအမျိုးသမီးအားကစားသမားဆယ် ဦး တွင် anabolic steroid ကိုအသုံးပြုသည်။ ဂျာမာ, 253 (19), 2871-2873 ။
1512 Views စာ
Steroids အမှုန့်ပေးသွင်းသူများအားအဆင့် ၁၂ ဆင့်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်
SARM SR9009 ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော ၀ ယ်ခြင်းလမ်းညွှန် Flibanserin သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အားလိင်ဟော်မုန်းအဖြစ်မည်သို့ကူညီသနည်း